Umtya we-warp kunye weft ubethelwe ubuncinci kanye, kunye ne-warp kunye ne-weft interlacing nafasi zongezwa ukuze zitshintshe ubume bendwangu kwaye ngokubhekisele kuzo kuthiwa zi-twill weave. Ubume bendwangu zi-twill ezimbini ezingaphezulu kunye ne-45 ° yelaphu elishiyileyo le-diagonal, le pateni yangaphambi kwayo icacile ...Funda ngokugqithisileyo »
Kukho iileya ezi-2 kule nto yonyango lwe-TPU. Eyokuqala ilaphu elisisiseko. Yindwangu engalukanga. Umaleko ongezantsi kwifilimu ye-TPU. Yenza indwangu ukuba inganiki umoya kwaye ingabi manzi. Umaleko we-TPU othambileyo nobhetyebhetye unokonyusa ukugqabhuka kunye nobuthathaka bempahla yelaphu. Iimpawu: ...Funda ngokugqithisileyo »
Ngomhla we-10 ku-Epreli, inkampani yethu yaya eVietnam ukuze ithathe inxaxheba kulo mboniso, ibonisa iimveliso eziphambili zenkampani yethu: Ilaphu leplastikhi, Indwangu yezamayeza, ilaphu lokwenza iimpahla, yanika abathengi umboniso weemveliso zenkampani kunye namandla eenkampani. Hebei Ruimian Textile Co, Ltd ...Funda ngokugqithisileyo »